ဖိုင်တွဲကိုချဲ့ထွင်ရန်မစွမ်းနိုင်ပါ။ ဖိုင်တွဲများ၏အစုကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ ဖိုင်တွင်အမှားများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ DataNumen Exchange Recovery ဖိုင်တွင်အမှားများကိုရှာတွေ့နိုင်သည်
Microsoft Outlook ကို အသုံးပြု၍ ဖွင့်သို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းပြုလုပ်ရန် အော့ဖ်လိုင်းဖိုင်တွဲ (။ost) ဖိုင်အောက်ပါ error message ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဖိုလ်ဒါကိုချဲ့ထွင်ရန်မရပါ။ ဖိုင်တွဲအစုများကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ xxxx ဖိုင်တွင်အမှားများတွေ့ရှိနိုင်သည်။ost။ မေးလ်ဖွင့်နိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုနုတ်ပါ၊ ပြီးနောက် Inbox Repair Tool ကိုသုံးပါ။
xxxx ဘယ်မှာလဲ။ost'' ၏နာမဖြစ်ပါတယ် အော့ဖ်လိုင်းဖိုင်တွဲ (။ost) ဖိုင် Exchange mailbox နှင့်အော့ဖ်လိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်သောအခါ Outlook မှဖန်တီးသည်။ သငျသညျလုံးလုံးလျားလျားဖန်တီးသောကြောင့်သင်ဖိုင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့ OST ဖိုင်သည်ပျက်စီးနေသည် (သို့) ပျက်စီးသွားပြီး၊ Microsoft Outlook က ပြုလုပ်၍ မရပါက၎င်းအမှားကိုသတင်းပို့လိမ့်မည်။
ဤအမှားကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်အောက်ပါအတိုင်း ကျေးဇူးပြု၍ လုပ်ပါ။
Microsoft Outlook နှင့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုပိတ်ပါ OST ဖိုင်။
အဆိုပါ Find OST အမှားဖြစ်ပေါ်စေသောဖိုင်။ အမှားမက်ဆေ့ခ်ျမှသတင်းအချက်အလက်အပေါ်အခြေခံပြီး, သင်ကအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသုံးနိုင်သည် ရှာရန် ရှာဖွေရန် Windows တွင်အလုပ်လုပ်သည် OST ဖိုင်။
အတွက်အော့ဖ်လိုင်းဒေတာကိုပြန်လည်ရယူပါ OST ဖိုင်။ အဆိုပါအိတ်ချိန်း OST သင့်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောသင်၏ Exchange mailbox ထဲတွင်မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အခြားအရာများအပါအဝင်အော့ဖ်လိုင်းဒေတာပါ ၀ င်သည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့်ကယ်တင်ရန်အတွက်သင်လုပ်ရမည် အသုံး DataNumen Exchange Recovery စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် OST ၎င်းဖိုင်ထဲရှိဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူပြီး Outlook PST ဖိုင်ထဲသို့သိမ်းဆည်းပါ Outlook နဲ့အတူမက်ဆေ့ခ်ျတွေ၊ ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအလွယ်တကူနဲ့ထိထိရောက်ရောက်သုံးနိုင်မှာပါ။
မူရင်းကိုအရန်ကူးထားပါ OST ဖိုင်။ လုံခြုံရေးအတွက်၊ သင်အဲဒါကိုပိုကောင်းကောင်းသိမ်းဆည်းထားချင်တယ်။
မူရင်းအမည်ပြောင်းပါသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ပါ OST ပြproblemနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းဖိုင်။
အမှားပြင်ပါ Outlook ရှိအီးမေးလ်အကောင့်ဆက်တင်များမှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့် Outlook သည်သင်၏ Exchange Server ကိုမှန်ကန်စွာဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းသေချာပါစေ။ ထို့နောက် restarOutlook နှင့် Outlook အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာ Exchange ကိုစာတိုက်ပုံးပေါ်တွင်သင်၏အီးမေးလ်များကိုပေးပို့ / လက်ခံပါ OST အလိုအလျှောက် file လုပ်၍ ၎င်း၏ data များကို Exchange mailbox နှင့်ထပ်တူပြုပါ။ အကယ်၍ ဤနည်းလမ်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါက၊ သင်၏လက်ရှိမေးလ်ပရိုဖိုင်းသည်မမှန်ကန်ပါက၎င်းကို ဖျက်၍ အသစ်တစ်ခုကိုအောက်ပါအတိုင်းဖန်တီးရမည် -
၈.၁ Microsoft Outlook ကိုပိတ်ပါ။
၈.၂ ကိုနှိပ်ပါ Start, ကိုနှိပ်ပါ ထိန်းချုပ်ရာနေရာ.
၈.၂ ကိုနှိပ်ပါ ဂန္ထဝင်မြင်ကွင်းသို့ပြောင်းပါ သငျသညျကို Windows XP ကိုသို့မဟုတ်မြင့်မားသောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနေလျှင်။
၈.၄ နှစ်ချက်နှိပ်ပါ စာပို့.
၅.၃ မေးလ်တည်ဆောက်ပုံ ပေးတဲ့ dialog box ကိုကလစ် Profiles များကိုပြပါ.
၈.၆ စာရင်းထဲမှမမှန်ကန်သောပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုရွေး။ နှိပ်ပါ Remove ကဖယ်ရှားပစ်ရန်။
6.7 မမှန်ကန်သော profile များကိုဖယ်ရှားပြီးသည်အထိ 6.6 ကိုထပ်မံလုပ်ပါ။
၈.၂ ကိုနှိပ်ပါ ပေါင်း ပရိုဖိုင်းအသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့်ဆာဗာရှိသူတို့၏ချိန်ညှိချက်များအရအီးမေးလ်အကောင့်များထည့်ရန်။
6.9 S ကtart Outlook နှင့်သင်၏ Exchange mailbox ကိုထပ်တူပြုပါကပြproblemနာပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
အဆင့် ၃ တွင်ပြန်လည်ရယူထားသောအချက်အလက်များကိုတင်သွင်းပါ။ သင့်ရဲ့ပြီးနောက် OST ဖိုင်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလား OST Exchange mailbox အတွက်ဖိုင်ဖွင့်ပါ၊ ပြီးနောက် Outlook ဖြင့်အဆင့် ၃ တွင်ထုတ်လုပ်ထားသော PST ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ။ အဲဒါကိုသင့်ရဲ့မူရင်းထဲမှာအားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်ဒေတာများပါရှိသည်အဖြစ် OST ဖိုင်အသစ်, သင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုသင်၏အသစ်သို့ကူးယူနိုင် OST ဖိုင်ရွေးပါ။